Ny androaniko | 6
[Ankapobeny ] 06 Septambra, 2018 17:27
Karaborosy tsy minday pasazy mandeha an-dafy.
Toran'ny hehy erý aho tamin'ny faran'ny herinandro teo fa sady nitaiza zana-bazaha kely aho tato no nanamboatra ity horonantsary ity : https://youtu.be/gmdPzE5OEfc
Nanontaniany aho hoe amin'ny fiteny inona izany hira izany ? Novaliako izy hoe amin'ny fiteninay, fiteny malagasy. Fa inona no lazainy ? Dia nazavaiko azy hoe nalahelo izy teny ambony fiaramanidina. Fa ho aiza izy ? hoy ihany rabefanontaniana. Hody hono, hoy ihany aho namaly sady somokotra namita ilay horonana. Angaha ianareo, hoy izy, mandeha fiaramanidina rehefa mody any Madagasikara ? Fa tadiavinao handeha inona izahay ? hoy aho taminy. Mandeha amin'ity, hoy izy, sady lasa izy nihazakazaka naka ity haingo-tranoko fataony kilalao ity.
ianao, hoy izy, niteny hoe itony ny fandehananareo manao voaiazy
[Hira ] 20 Aogositra, 2018 22:26
"Efa diva hanao veloma
Ka manala ny alahelony
Hira tena tiako fony izaho mbola zaza nitombo ka hatramiizao an-dalam-pahanterana izao ity hiran'i Pauline Rabehasy ity. Izaho moa tsy dia naharaka na nankafý loatra ireny hira vahiny ireny, ka raha ny ankizy variana tamin-dr'i Scorpion sy ry Bangles, izaho mbola nianoka tanteraka ny kalon'ny fahiny.
[Aingam-panahy ] 02 Aogositra, 2018 19:02
Rahampitso maizim-bolana, hoy i neny taminao
Hanainga antsokosoko isika, haka sambo ka handao
Ity tany feno ady, ravaravan'ireo baomba
Ho any an-tany lavitra any, hanovo fiainam-baovao.
Onjan-drano, oran'andro, haizim-pito no sedraina
Hafanana mahaana mila hahafaka aina
Ilay vary iray fonosana natao vatsy efa lany
F'ilay faravodilanitra mbola tsy tazana ihany
Andro firy izay no lasa, sa vao omaly no niainga ?
Kely sisa dia ho tonga, hoy i neny toa mandainga
Fa ny ranomasonao toa ritra, ny molotrao nihanangina
Dia naronjonao tan-tratrany ny lohanao makiana
Dia nitsangana i neny, niova toera-nilasiana
Tsy nalàny teny an-tratrany ilay vata-mangatsiaka
Ny nijery mbola nihevitra fa torimason-jaza
Fa raha hain'ny tompon-tsambo, omeny trondro ianao ho haza
Fa nihantsona ny sambo, tody ihany tan-tseranana
Dia natolotry i neny ireo mpitsena ilay zanany
Efa simban'ny hain'andro sy ny rivotra sy orana
Ka dia vata fotsy sisa no handriany am-piadanana.
(loharanon'aingam-panahy : TATO. Efa nodimandry andro vitsivitsy ilay zaza fa nafenin-dreniny teny an-tratrany foana satria raha hitan'ny hafa dia asaindrizareo avalana any an-dranomasina )
[Ankapobeny ] 24 Mey, 2018 19:31
'Mpifamofo mandra-maty', tantara nosoratan'i Thinà.
Azo lazaina fa maromaro namana manana talenta aho : ao ireo mpanakanto ara-mozika dia ao ireo havanana amin'ny asa soratra. Maro noho izany ny kapila mangirana sy ny boky izay natolotr'izy ireo na nojifaiko tamindrizareo.
Raha ny asa soratra dia tononkalo no maro an'isa. Mahafinaritra ahy misintona boky iray izay tandrify ny tànako dia mitsaingoka pejy iray hovakiana rehefa milamindamina iny aho. Tsy ataoko sesi-montotra fa matetika ataoko fakana aingam-panahy.
Ny boky farany voaraiko teo kosa dia tsy tononkalo fa tantara : "Mpifamofo mandra-maty" nosoratan'i Thinà Andriafaly (na i Tsikisariaka eto amin'ny serasera). Tsy nampoiziko ho tantara, fa noheveriko fa raki-tononkalo toy ny mahazatra ilay izy raha tsy tonga teny an-tanako.
Mpiara-mianatra teny amin'ny Sekoly Ambaratonga Faharoa izahay roavavy nanomboka tamin'ny taona 1980, fa nandritra ny taom-pianarana - sendra nifampitantara hoe misy fahoriana ao amin'ny fianakaviana - vao nahalala fa hay mpihavana tsy mifanalavitra akory. Saingy ny finamanana no tena namatotra anay hatramizay ka hatramizao.
Efa tonga namangy ahy tatý Roma izy indray taona, nanararaotra ny fandalovany niasa tatý Eoropa. Tsaroako izy niteny tamiko hoe "hosoratako ho tantara izay" raha nisy zavatra noresahanay mirahavavy tamin'izay fotoana izay. Tsy nijanona tanaty saiko kosa anefa ilay resaka raha tsy tafavoaka ny boky ka nampatsiahiviny ahy.
Ny tantara moa tsy azo tsimponina toy ny tononkalo ka efa iray volana taorian'ny nahazoako ny boky aho vao nanana fotoana nifantohana taminy. Edrey fa dia tao aho no noraisina fa tsy nijanona raha tsy ny maso no vizana ary ny torimaso no niantso. Tsy lavabe rahateo moa ilay izy ka nisononoka ery ny famitàna azy.
Sady velon-tsiky teny am-piandohana sy teny an-tenantenany teny fa nahatsapa ho nahazo anjara ankolaka tanaty tantara ihany ny tena, satria tantaran'i Mialy zanak'i Ravolasoa ity izy. Mbetika nitsetsetra, mbetika nitaintaina, mbetika nitsiky teny am-pitetezana ireo pejy 160 mahery. Ary tsy nampoiziko ny niafarany ka dia nirotsa-dranomaso sy velon-tsento terý.
Hay ve ka tsy mivetsovetso lasam-borona amin'ny tononkalo fotsiny ny talentany, hoy aho, fa miangaly tantara mihitsy koa. Ny fahaiza-mamorona, ny fomba fanoratra, ireo voambolana sy sarinteny nampiasaina moa dia aoka fotsiny. Manaiky aho fa voafehy ary nentina niakatra avo ilay taranja.
Dia mandrosoa hasina akia rahavavy dia misaotra indrindra nizara !
Mino aho fa azo jifaina eny amin'ny fivarotam-boky mahazatra izy ity fa izaho aloha dia mamporisika hoe vakio fa tsy mandiso fanantenana.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 52 53 54 Manaraka»